को’रोना सं’क्रमित ९ महिने छोरालाई हेर्दै भावुक बनेका बाबुको दृश्यले विश्वलाई रु’वायो ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/को’रोना सं’क्रमित ९ महिने छोरालाई हेर्दै भावुक बनेका बाबुको दृश्यले विश्वलाई रु’वायो !
एजेन्सी। यो समचार केहि समय पहिले चीनमा कोरोना महामारी फैलिएको बेलाको दृश्य जसले विश्वलाई रुवायो । देख्ने बित्तिकै आफ्नो काखमा आउन उत्साहित हुदा समेत आफ्नो ९ महिने छोरोलाई अंकमाल गर्न नपाएपछि बाबु भ’क्कानिए । छोरा को’राना भा’इरसको सं’क्रमणको उपचारका लागि आइलोशेनमा थिए । बाबु र छोराको हेराहेर मात्रै भयो । छोराले बाबुको स्पर्श खोजिरहेका थिए । तर बाबु बिवश थिए, बाबु र छोरा नजिकै रहेपनि अवस्थाले उनीहरुलाई धेरै टाढा बनाएको थियो । आइशोलेसन कक्षको सिसा वारपार बाट बाबु र छोरा दुबैले एक अर्कालाई स्पर्श गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए ।